ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ မြေးများ ဂျာနယ်တွင် ကြော်ငြာထည့်
Saturday, October 16, 2010 9:48 AM M | Posted by Unknown
အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၀ ကြာသပတေးနေ့ထုတ် 7Day ဂျာနယ်မှ ကြော်ငြာ တခု။
ကြော်ငြာ ထည့်သွင်းသည့် ကလေး ၂ ဦး၏ အဖိုးဖြစ်သူမှာ ပြည်သူအများအပြား၏ မနှစ်သက်မှုကို ခံယူထားသူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ဖြစ်သည်။
ကြော်ငြာတွင် ပါဝင်သော "ချစ်သော ပါပါး ဦးထွန်းနိုင်ရွှေ" ဆိုသူ၏ အကြောင်းကို http://tunnaingshwe.blogspot.com/ တွင် ဖတ်နိုင်သည်။
ထွန်းနိူင်ရွှေ (ခ) ထွန်းထွန်းနိူင် Tun Naing Shwe (a) Tun Tun Naing
Tun Naing Shwe (right)
Title: Son of Senior General Than Shwe
(a.k.a.) Tun Tun Naing
Wife : Khin Thida
He has business but he is the poorest among all children of Than Shwe. But his properties are 12 mansions, J Donuts shops, My Milk restaurants, and many other import/export contracts. About 35% of these property belongs to him while the rest to Burmese-born Chinese. They are business partners.
His other businesses are Dim Sum foodshops, import from Thailand (Queen Orange Juice Concentrates), nightclubs (Dream Jelly J-J), Karaoke-attached Thai restaurants and many others. No only in Burma, he also has business in China, Thailand and Indonesia.
Moreover, Tun Naing Shwe does business with his former friend, Joseph Khin Maung Thein (son of Oo Aung Thein). They own J&J company together. Joseph manages Tun Naing Shwe's business in Thailand while his sister, Clara, manages those in China.
All these business are due to the power of his father, Than Shwe and are funded by the income exploited from Burma's natural resources.
There is no benefit to the civilians. The businesses are run on labor of the Burmese people. Therefore, we should turn our back on the business owned by Than Shwe's family, Tun Naing Shwe and their partners.
Tun Naing Shwe and Joseph Khin Maung Thein well known as Joseph and Tun Naing ShweTun Naing Shwe is Than Shwe's son andKhin Maung Thein is the son of U Aung Thein
Joseph was born in Taikkyi, Burma. His wife is from Thailand
Tun Naing Shwe and Joseph were classmates since High School, the time has passed by and they are still like brothers
Tun Naing Shwe and Joseph jointly own: J&J Company which is not in the sanctions list of sanctionU Shweajewel smuggler by trade
Hmu Pwel Ser Wayang Pyay meansabroker (not evenalawyer) for legal cases either; civil or criminal
Their business in Burma are many:
J-Donuts isachain of shops nationwide
Many Oriental House Restaurant and Dim Sum againanationwide chain of restaurants
Queen Orange Juice Concentrates Imported From Thailand
Dream JellyJ-J Night Club
Many Thai Restaurant --Many Karaoke Lounges --Also owns businesses in China, Thailand, and Indonesia like the J&J in Bangkok --
Joseph manages their business in Thailand and Indonesia.Joseph's sister Carol and brother-in-law Richard manage the businesses in China.
Lun Thi, Energy Minister's son Zin Maung Lun and Zar Chi Ko (the Energy Minister's daughter-in-law) now live in Singapore and are moving out their properties from Burma.
Credit to Moemaka: http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=85&Itemid=118
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း ဦးဆောင်သော စစ်အစိုးရက အခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုသည့် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်မှ စတင်ကာ ယခုအချိန်ထိ အသုံးပြုနေသော အလံ (နောက်) နှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ဦးဆောင်သော လက်ရှိ စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေတွင် အဆိုပြုထားသော အလံသစ် (ရှေ့) တို့ ဖြစ်ပါသည်။ (RFA image)
ပထမအသုတ်အနေနဲ့ အလျား ၆ ပေ၊ အနံ ၄ ပေ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတော် အလံ တသိန်းခွဲချုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားထားပြီး အဲဒီလို ချုပ်လုပ်ရမဲ့ ပိတ်စတွေကို မြောက်ဥက္ကလာပရှိ အမှတ်(၁) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအမှတ် (၁၇) မှာ ထုတ်ယူရတယ်လို့ ရန်ကုန်အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေဆီက သိရှိရပါတယ်။
အလံတခုကို ချုပ်ခ ကျပ် - ၆၀၀ ပေးပြီး အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့အမီ အပ်ရမယ်လို့ အသင်းဝင်စက်ရုံတွေကို စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ရန်ကုန် အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေကို ချုပ်ခိုင်းထားတဲ့ နိုင်ငံတော်အလံသစ် အဝါ၊ အနီနဲ့ အစိမ်း သုံးရောင်ခြယ် အလံ (ပုံ) ဖြစ်ပြီး အလယ်မှာ ကြယ်ဖြူအသစ်တလုံး ပါရှိပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရအသုံးပြုနေတဲ့ လက်ရှိအလံကတော့ ၁၉၇၄ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေအရ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Credit to RFA Burmese: http://www.rfa.org/burmese/news/garment_factories_rushing_to_roll_out_new_flags-10152010110217.html
နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲသည် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထပ်မံ သတိပေး
Friday, October 15, 2010 6:09 AM | Posted by Unknown
Credit to DVB: http://burmese.dvb.no/news.php?id=12470
အန်အယ်လ်ပါတီ တရားဝင် ဆက်လက်ရပ်တည်နေဆဲ
6:05 AM | Posted by Unknown
Credit to DVB: http://burmese.dvb.no/news.php?id=12464
အကျဉ်းသား ရှစ်ထောင် ဆရာဝန် ၁ ဦး ဆေးကုသပေးနေပြီ
6:03 AM | Posted by Unknown
Credit to DVB: http://burmese.dvb.no/news.php?id=12463
ကြံ့ဖွတ် မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီ လုပ်ချင်အုန်း ဟဲ့ ကြံ့ဖွတ်
Thursday, October 14, 2010 11:37 PM | Posted by Unknown
Credit to DVB: http://burmese.dvb.no/news.php?id=12457
ထိုင်းနာမည်ကြီး ရော့ခ်အဆိုတော် "Carabao"ရဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ဂုဏ်ပြုတေးလက်ဆောင်
11:28 PM | Posted by Unknown
ဘွိုင်းကောက် ၂၀၁၀ အတွဲ (၁) အမှတ် (၄) စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀
Sunday, October 10, 2010 8:12 PM | Posted by Unknown
Boycott Vol4Sep 19 2010
အလင်းအိမ် မဂ္ဂဇင်း စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀
7:56 PM | Posted by Unknown
01 oct 10 September 2010 Burma Bulletin
01oct10 September 2010 Burma Bulletin
3:36 PM | Posted by Unknown
တောင်ကြီး GTC ပြိုကျပျက်စီးခြင်း
3:28 PM | Posted by Unknown
Photo Credit to: SWS Face Book
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် Las Vegas မြန်မာမိသားစုများက အောက်တိုဘာ ၃၀ မှာ ဂီတဆည်းဆာပွဲကို ဖိတ်ပါတယ်
2:59 PM | Posted by Unknown
ရွာဆော်ကြီးပြက္ခဒိန် - ဖိတ်ကြားလွှာများ
မိတ်ဆွေများအားလုံးကို အခုလို ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။
ဂီတဆည်းဆာညချမ်းနှင့် ရသာစုံ မြန်မာ့အစားအစာများကို ရောင်းချ၍ ရရှိသည့် ရန်ပုံငွေများကို မြန်မာပြည်တွင်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ဆောင်နေသော လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ အမေရိကန်နိုင်ငံ အခြားမြို့များရှိ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အသင်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ထောက်ပံ့ကူညီရန် ကျင်းပသောပွဲဖြစ်သည်။
ဤပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွင် ရသာစုံမြန်မာအစားအစာများကို ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ရုံမက စိတ်ပါဝင်စားသူ အဆိုဝါသနာရှင်များအတွက်လည်း မြန်မာကာရာအိုကေ သီချင်းအပုဒ်ရေ တစ်သောင်းကျော်ထဲမှ နှစ်သက်ရာကို အခမဲ့ ရွေးချယ်သီဆိုနိုင်ရန် စီစဉ်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာမိသားစုများအားလုံး တက်ရောက်ပါဝင် အားပေးကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော အောက်ပါမြန်မာအစားအစာများကို အားပေးဝယ်ယူသုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
ခေါက်ဆွဲသုပ်၊ လက်ဖက်ရည်၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ ကြာဇံကြော်၊ ဖာလူဒါ၊ ဆာတေး (ကြက်၊ ဝက်)၊
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အမှတ်တရ တီရှပ်များကိုလည်း ရောင်းချပေးသွားပါမည်။
နေ့ရက် ။ ။ အောက်တိုဘာလ (၃ဝ) ရက် (စနေနေ့)
အချိန် ။ ။ ညနေ ၅ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ
နေရာ ။ ။ 3925 Sauceda Lane, Las Vegas, NV 89103
ဝင်ကြေး ။ ။ $၁ဝ (လူကြီး)၊ အခမဲ့ (ကလေး) (ငွေလက်ငင်း ချေရန်)
အသေးစိတ် အချက်အလက်များအတွက် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
(702) 308-0667 begin_of_the_skype_highlighting (702) 308-0667 end_of_the_skype_highlighting, (702) 273-8715 begin_of_the_skype_highlighting (702) 273-8715
Credit to Moemaka: http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7359&Itemid=1
2:45 PM | Posted by Unknown
မန္တလေးဘက်မှာ ရေကြီးရေလျှံ နေပုံ (Photo Credit -ALT facebook)
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက မိုးသည်းထန်စွှာရွှာပြီး ရေကြီးမှုတွှေဖြစ်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့က ရပ်ကွှက်တွှေမှာ အခုချိန်ထိ ရေလွှမ်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ကြီးတံခွှန်၊ ချမ်းမြသာစည်၊ မဟာ အောင်မြေ စတဲ့ မြို့နယ်တွှေထဲက အောင်ပင်လယ်၊ မြရည်နန⍀ဒာ၊ ကန်သာယာ၊ သမန်းကုန်း စတဲ့ ရပ်ကွှက်တော်တော်များ များမှာ အခုအချိန်အထိ ရေလွှမ်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအထဲက ပြည်ကြီးတံခွှန်မြို့နယ်ဟာ ရေဘေးအဆိုးဆုံးခံရတဲ့ မြို့နယ်ပါပဲ။ ၆၂ လမ်းရဲ့ အရှေ့ဘက် တခြမ်းလုံး ရေလွှမ်းခံရပါတယ်။ ပွှဲကုန်းဘက်မှာ လှေတွှေနဲ့ သွှားလာနေကြရပါတယ်။ သင်⍀ဂဇာချောင်း၊ ရွှေတစ်ချောင်းမြောင်းနဲ့ မြို့ထဲက ရေဆိုးမြောင်း တော်တော်များများဟာလည်း ရေလျှံပြီး နေရာတချို့မှာ လမ်းတွှေေပါ် ရေကျော်နေပါတယ်။
ရေဘေးခံနေရတဲ့အရပ်ထဲက လူငယ်တစ်ဩးက လောလောဆယ်မှာတော့ ရေတက်လာလို့ လူတွှေ နေရေးထိုင်ရေးနဲ့ စားရေးသောက်ရေး အခက်အခဲ ရှိနေတယ်လို့ ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
တချို့က ပစ⍀စည်းဆုံးရှုံးမှာစိုးပြီး အိမ်တွှေေပ်ါက မဆင်းလို့ ရေကြီးလာတဲ့အခါ လှေတွှေ ဘောကွှင်းတွှေနဲ့ လိုက်ကယ်ပြီး ကျန်းမာရေးမကောင်းရင်တော့ ဆေးရုံကို ပို့ပေးနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ရေဘေးဒုက⍀ခသည်အရေအတွှက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတစ်ဩးက သူတို့ရောက်ခဲ့တဲ့ သမန်းကုန်းမှာ ဆိုရင် လူဩးရေ နှစ်ထောင်လောက်အထိ ရှိနေပြီး နေရာအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် လူဩးရေ တစ်သောင်းကျော်လောက် ရှိမယ်လို့ ခန်မှန်းပါတယ်။
ရေဘေးဒုက⍀ခသည်တွှေဟာ ရေလွှတ်ရာ စာသင်ကျောင်း ၊ ဓမ⍀မာရုံနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွှေမှာ ခိုလှုံနေကြရပါတယ်။ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးတွှေကို မြို့ခံ စေတနာရှင် လုပ်ငန်းရှင်တွှေနဲ့ ဗြဟ⍀မစိုရ်၊ လောကပါလ၊ ချမ်းမြသုခ၊ မြင့်မြတ်ဧရာဝတီ စတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းတွှေက ကူညီပေးနေကြပါတယ်။
ဒုက⍀ခသည်တွှေအတွှက် အခြေခံလိုအပ်ချက် ဆန် ဆီ ဆား ပဲ ငြုပ် စတဲ့ စားသောက်ကုန် ပစ⍀စည်းတွှေကို တနိုင်တပိုင် လိုက်လံကူညီပေးနေပါတယ်လို့ မြင့်မြတ်ဧရာဝတီ ပရဟိတအသင်းဝင်တစ်ဩးက ပြောပြပါတယ်။ ဒီအသင်းအပါအ၀င် မန⍀တလေးမြို့ခံ လုပ်ငန်းရှင်တွှေ ပရဟိတ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွှဲ့တွှေက တနိုင်တပိုင် ကူညီဆောင်ရွှက်နေကြပါတယ်။
လောလောဆယ် မိုးထပ်မသည်းလို့ ရေတန့်နေပေမယ့် ဒေသခံတွှေကတော့ မိုးများပြီး ရေထပ်တိုးလာမှာကို စိုးရိမ်ပူပန်နေကြရပါတယ်။
Credit to BBC Burmese: http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2010/10/101009_mandalay_flood.shtml
Credit to Ko Htike: http://ko-htike.blogspot.com/2010/05/blog-post_22.html
မြန်မာလူ့အခွင့်အရေး ကုလစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ အက်စ်တိုနီးယား က ၁၃ နိုင်ငံမြောက်ထောက်ခံ
2:18 PM | Posted by Unknown
(ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး မှာ စစ်အစိုးကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေထဲက ခိုင်လုံတဲ့ရာဇဝတ်မှု )ု
Credit to VOA Burmese: http://www.voanews.com/burmese/news/Burma-UN-Inquiry-Estonia-10-08-10-104575554.html
ရာဇ၀တ်ဘေးက ရှောင်ပြေးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကရာဇ၀တ်ကောင်တွေကို အရေးယူအပြစ်ပေးကြပါစို့ (ရိုဇိုယိုကိုဒါ )
2:07 PM | Posted by Unknown
မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်တခုတွင် ရိုဇိုယိုကိုဒါ အား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရဦးတင်ဦး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံများ - daylife.com)
မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်တခုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံများ - daylife.com)
Boycott Sham 2010 -7November Elections in Burma!
“The next time they give you all that civic
bullshit about voting, keep in mind that
Hitler was elected inafull, free democratic
မြန်မာအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် သူရဦးတင်ဦးကို စင်္ကာပူမြန်မာများ လှိုက်လှဲစွာ ဂါရ၀ပြူကြ
အောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၀
(၁၀၊ ၁၀၊ ၁၀)
၂၁ ရာစု၏ ထူးခြားသော နေ့စွဲ ၁၀ သုံးလုံး - ၁၀ ရက်၊ ၁၀လ၊ ၁၀ ခုနှစ်နေ့၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ တိုပါးယိုး မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် နေ့ခင်း ၁ နာရီက စင်္ကာပူမြန်မာများ စုဝေးကြပြီး မြန်မာပြည်၏ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် သူရဦးတင်ဦး ဆေးကုသရန် အလည်ရောက်နေစဉ် တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက် ဂါရ၀ပြု ကြသည်။
မြန်မာပြည်သား လူကြီး၊ လုူငယ်များ၊ ကျောင်းသားများ မြောက်များစွာတို့ မိမိတို့ အစီအစဉ်ဖြင့် လာရောက်ကြပြီး မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ကောင်းမှုကုသိုလ်လာပြုသော ဦးတင်ဦးကို တွေ့ဆုံကြသည်မှာ အလွန်ကြည်နူးဖွယ် မြင်ကွင်းဖြစ်သည်ဟု မျက်မြင်တဦးက ပြောသည်။
မြန်မာပြည်၏ တခုတည်းသော အတိုက်အခံပါတီ အင်န်အယ်ဒီ၏ ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်ရုံသာမက တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတဦးလည်း ဖြစ်သော သူရဦးတင်ဦးမှာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျက်ရှိပြီး မိတ်ဆွေဟောင်းများအားလုံးကို ကောင်းကောင်းကြီး မှတ်မိပြီး မိတ်ဆွေသစ်များကိုလည်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ နှုတ်ဆက်စကားပြောလျက် ရှိသည်ဟု ပြောပြသည်။
Credit to Moemaka: http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7361&Itemid=1
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ မြေးများ ဂျာနယ်တွင် ကြော်ငြာထည့...
နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲသည် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်နိုင်မ...
ကြံ့ဖွတ် မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီ လုပ်ချင်အုန်း ဟဲ့ ကြံ့...
ထိုင်းနာမည်ကြီး ရော့ခ်အဆိုတော် "Carabao"ရဲ့ မြန်မာ...
ဘွိုင်းကောက် ၂၀၁၀ အတွဲ (၁) အမှတ် (၄) စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀...
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် Las Vegas မြန်မာမိသားစုများက အောက်တ...
သန်းရွှေအား ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တကျွန်းနှင့် သေဒဏ် ချမှတ...
Boycott Sham 2010 -7November Elections in Burma!...
မြန်မာအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် သူရဦးတင်ဦးကို စင်္ကာပ...